ဝီရသူ-ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဝါဒစွဲမထားပါ။ နိုင်ငံကောင်းစားစေလိုသောကြောင့်။ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » ဝီရသူ-ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဝါဒစွဲမထားပါ။ နိုင်ငံကောင်းစားစေလိုသောကြောင့်။
ဝီရသူ-ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဝါဒစွဲမထားပါ။ နိုင်ငံကောင်းစားစေလိုသောကြောင့်။
“အွန်လိုင်း ပရိသတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ”
by Wira Thu (Notes) on Wednesday, April 17, 2013 at 5:08pm
မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှစ၍ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သက်ရှည်ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာအောင်မြင်၊ ဘေးရန်ကင်းစင်၍၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ-ဟုနှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းအဖြစ် ထပ်မံ၍ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည်။
အွန်လိုင်းပရိသတ်ကြီးပို့သသော အကြမ်းအနု မျိုးစုံသော မေတ္တာဓာတ် တန်ခိုးကြောင့် ဦးပဉ္စင်းလည်း ရောဂါကင်းစင်၊ကြည်လင်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာလျက် အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းအတွက် မေတ္တာပို့သသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်ရပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင် တစ်ဖက်သက်ဆန်သော ဝေဖန်မှုများ ရှိနေရာ န-အ-ဖ-လက်ထက်က အပုပ်ချ သတင်းစာကဲ့သို့ဆိုင်ရာ မီဒီယာများ သိက္ခာကျ အရှက်ရစရာ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံရေးသားထားချက် များကို တွေ့နေရပါသည်။
အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး စိတ်ကြွဆေးစသည့် တားမြစ်ဆေးများ အလွန်အကျွံ မှီဝဲသုံးစွဲထားသည့် ပုံစံမျိုးရေးသားထုတ်လွှင့်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းကျောင်းသားဘဝကအရက်တစ်ငုံ သောက်ဖူးပါသည်။ မြည်းကြည့်သည့် သဘောဖြစ်ပါသည်။ ခါးလည်းခါးပါသည်။ နံလည်းနံပါသည်။ရေနွေးကြမ်းခွက် အရွယ်ရှိသော ခွက်သေးသေးလေးဖြင့် ထန်းရည် တစ်ခွက် သောက်ဖူးပါသည်။ အဖေ့သူငယ်ချင်းကဆီးကောင်းသည်ပြောသောကြောင့် အဖေနှင့်အတူ ညနေစာစားရင်း သောက်ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဒူးယားစီးကရက်ပုံစံ လုပ်ထားသော မုန့်လိပ့်လေး ခဲ့ဖူးပါသည်။ ခြင်းခက်ရင်း ခဲထားရာ အဖေကစီးကရက် အစစ်ထင်ပြီး နားရင်းအုပ်သောကြောင့် ဆေးလိပ် မသောက်ရဲတော့ပါ။ ယခု အချိန်ထိ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူမိလျှင် ခေါင်းမူးတက်ပါသည်။
ထောင်ထဲမှာနေရစဉ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးက ဆေးစပ်ပေးသဖြင့် ငှက်ဖျားဆေး Quinine-နှင့် အိပ်ဆေး Phenobarbitone-ဆယ်ရက် သောက်ဖူးပါသည်။ ထောင်ထဲမှာ နေရစဉ်ကာလမှာတောင် အခြားနိုင်/ကျဉ်း အများစုလို စိတ်ငြိမ်ဆေးChlo Proma Zine(CPZ)ပင် မသောက်ဖူးခဲ့ပါ။ ယခုချိန်မှာလည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အားဆေးမှလွဲ၍ကန့်သတ်ဆေးများ လုံးဝမသောက်ဖြစ်ပါ။ အမေရိကန်၏ ဘိုးအေကြီး များနှင့်လည်း အစစ်ဆေးခံနိုင်ပါသည်။
ဝီရသူ-ငွေကြေး စာရင်းအင်း ဇယားမရှုပ်ပါ။
ဝီရသူ-ရှေ့တစ်မျိုး နောက်တစ်မျိုး မလုပ်တက်ပါ။
ဝီရသူသည်သစ္စံဓမ္မ၊ ဝီရိယနှင့်၊ စာဂဟူသည်၊ ရန်သူအောင်ကြောင်း၊ ကျင့်ကောင်းလေးဖြာ၊ စသည်အားဖြင့်၊တရားမလစ်၊ မင်းမူရစ်လော့။(မဃ)လာ ဘုရားဟောဒေသနာ ရန်သူအောင်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သောသစ္စာ၊ ဓမ္မ(ပညာ)၊ ဝီရိယ၊ စာဂ-ဤတရားလေးပါးကို အမြဲလက်ကိုင်ထားပါသည်။
အွန်လိုင်းပရိသတ်ကြီးကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးရန်ကွာ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ……..
၁၃၇၅-ခု မြန်မာ နှစ်ဆန်း(၁)ရက်
17-4-2013 PM 8:35
56Unlike · · Share
You, မျိုး သိန်း, Lin Htein, Thet Naing Maung and 170 others like this.
U Hein Hein Congratulaton ဆရာတော် , ဆရာတော် ဘေးရန်ကင်းစွာ ကျန်းမာစွာဖြင့် သာသနာ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ ဘုန်းကြီးလို့ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ အရှင်ဘုရား .
Wednesday at 5:17pm · Like · 4
WhiteCandy Lay ဆရာတော်ကိုဘယ်မီဒီယာကပြောတာလဲမသိဘူး…ကုလား၇ဲ့လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေပဲဖြစ်မယ်..
Wednesday at 5:18pm · Like · 3
Aung Chyu ရှိခိုး ဦးခိုက် ကန်တော့ပါတယ် ဘုရား
Wednesday at 5:18pm via mobile · Like · 3
Zeno Htat တပည်.တော် ခြေတော်ဦးတိုက် ကန်တော.လိုက်ပါတယ်ဘုရား
Wednesday at 5:21pm · Like · 2
Mocha Cofi အမျိူးဘာသာ သာသနာတာဝန် ကို ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဘုရား…………..ရိုသေစွာ ကန်တော့လျက် …
Wednesday at 5:23pm · Like · 5
Ko Gyi ဦးတွတ် ကိုတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ဖုန်းဆက်ပြီး သတိပေးမိပါတယ် ဘုရား။
သာသနာ့ အာဇာနည် တစ်ပါး ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆုံးအရှုံး မခံနိုင်ပါ ဘုရား။
Wednesday at 5:24pm via mobile · Like · 4
Thein Htike ဆရာတော် ကျန်းမာပါစေ
Wednesday at 5:25pm · Like · 3
Hawdeka Khalaylay 🙂
Ven Itthasara ဆရာတော် အမျိုးဘာသာအတွက် အမြဲတမ်း ရဲရင့်နိုင်ပါစေ ဆရာတော်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကို တပည့်တော် အနီးကပ်နေဖူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရား ဆရာတော့်ကို သာသနာတော်ကိုယ်စား တပည့်တော်ကဘဲ ဂုဏ်ယူလျက် တပည့် ဣဋ္ဌသာရ မန္တလေးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
Wednesday at 5:46pm via mobile · Like · 2
Kyaw Soe ဆရာတော်ကို ရှိခိုးပါသည်
Wednesday at 5:54pm via mobile · Like · 2
Khin Maung Soe Well-done, well-done, well-done! May God bless you, Myanmar and the rest of the world!
Wednesday at 6:02pm · Like · 1
Kyaw Bo ဆရာတော်ဘုရားကျန်းမာချမ်းသားပြီးအမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက်ဆထပ်တန်ပိုးတိုးလို့ဆောင်ရွတ်နိုင်ပါစေဘုရား ဆရာတော်ကိုထာဝရလေးစားဂုဏ်ယူလျှက်ပါဘုရား
Wednesday at 6:18pm via mobile · Like · 2
Yinyinhtwe Ma အရှင်ဘုရားလည်းနှစ်သစ်နှင့်အတူ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝပါစေအရှင်ဘုရား
Wednesday at 6:21pm via mobile · Like · 2
Kyaw Bo nuree harkဟေ့ကောင်ဆရာတော်ကိုပြောရအောင်မင်းကဘယ်လောက်သတ္တိရှိလို့လည်းမိုက်ရင်နေရာမရွေးဘူးအချိန်မရွေးဘူးချိန်းလိုက်
Wednesday at 6:22pm via mobile · Like · 1
ZM Ucsy ဦးပဉ္စင်းလို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် အသတ်ကိုပဓာ မထားဘဲ အမျိူးဘာသာ သာသနာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတဲု့ သာသနာ့ အာဇာနည် တစ်ပါးအပေါ် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံရေးသားထားချက် များကို အသေခံပြီးကြိမ်ပြောမယ် ဆိုရင်တောင် အရှင်ဘုရားကို ယြုံကည်လေးစားသော ဗုဒ…See More
Wednesday at 6:22pm · Like · 4
Ko Thant Rasu ဆရာတော်ကျန်းမာပါစေဘုရား။
Wednesday at 6:26pm via mobile · Like · 3
Nay Min Swe ဆရာတော်၏ဆန္ဒ ဓမ္မအမှန်အလင်းများ ကမ္ဘာပတ်လုံးပျံ့နှံ့တည်တန့် နိုင်ပါစေသားဘုရား…. ဆရာတော်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာ စွာဖြင့် အန္တရာယ်ခပ်သိမ်း ကျော်လွှားနိုင်ပြီး လောကငြိမ်းချမ်းရေးကို လွယ်ကူစွာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေသားဘုရား….
Wednesday at 6:40pm · Like
ဝီရ ဓမ္မ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့တွေက ၁၀၀% အပြည့်အဝ ကြည်ညိုနေပါသည်။ သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်တိုးပြီးဆောင်ရွတ်နိုင်ပါစေ။
Wednesday at 7:04pm · Like · 2
Koaung Myo ဆရာတော် စ်ိတ်ကျမ်းမာ ကိုယ်ကျမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနိုင်ပါစေ။
Wednesday at 7:21pm via mobile · Like · 2
Andrew Wang Sayadaw is our Buddhist leader and National leader who against Islamic colonialists in Myanmar.
Wednesday at 10:25pm · Like · 1
Maung Lwin "Managalapa Sayadaw U Wira Thu", I would like to wish "Happy New Year for You and People who live in Burma". We respect and love you. We believe that "Our Sayadaw and You love "Our Country and People" more than "Our Government". "Our Sayadaws are alway…See More
Wednesday at 10:31pm · Like · 2
Thein Zaw ဆရာတော် ဘုရားလည်း ကျမ်းမာရောဂါကင်း ဘေးရှင်းပါစေဘုရား
Wednesday at 11:19pm via mobile · Like · 2
Naing Winhtet ဆရာတော်ကျန်းမာချမ်းသာအသက်ရှည်စွာဖြင့် သာသနာ့အန္တရာမွတ်စလင်ဆူးညောင့်အစရှိသည်တို့ကို နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကာကွယ်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်ဘုရား ရိုသေစွာဖြင့် ဘုရားတပည့်တော်………….
Yesterday at 1:00am · Like · 1
Thurain Swe အမျိုး ဘသာ သာသနာကို ယခင်ထက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေကြောင်း မော်လမြိုင် ဂဏ၀ါစက သံဃာ့အဖွဲ့ မှ ဆုတောင်းအပ်ပါသည်
Yesterday at 1:17am · Like · 1
Chosan Aye ဘာပြောပြောမယုံပါဘုရား သာသနာအတွက်အသက်စွန့်ဝံ့သူ ဆရာတော်အား လေးစားတန်ဖိုးထားလျှက် ဦးခိုက်ပါသည်ဘုရား
Yesterday at 1:38am via mobile · Like · 1
Ni Soe ဆရာတော်ကျန်းမာပြီမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အင်အားဖြစ်ပါစေ။
Yesterday at 2:21am via mobile · Like · 1
Myoko Ko ခွေးဟောင်တိုင်း ထမကြည့်ပါနဲ့ ဘုရား အာညောင်းရင်တိတ်သွားမှာပါ
Yesterday at 2:35am via mobile · Like
Ashin Ohatama ထမကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုတောင်ပြန်ကိုက်မဲ့ ခွေးတွေလည်းရှိတယ် သတိသတိ အမြဲရှိမှ တန်ကာကျမယ်နော
Yesterday at 2:49am · Like · 2
Lin Naing Oo I do respect you.
Yesterday at 3:10am via mobile · Like
တမ္ပဝတီ သား ဆရာတော် နောက်မှာ အပည့် တော်တို့ အပြည့် အဝ လိုက်ပါမယ်။
Minthatthun Yarma ယုံကြည့်﻿﻿လေးစားတန်﻿ဖိုးထားလျှက်﻿ပါဘုရား
Yesterday at 3:50am via mobile · Like
Kyaw Mawaung တပည်.တော် ထာဝရ ဦးညွတ်ပါသည် အရှင်ဘုရား
Yesterday at 4:02am · Like
Ma Chaw လေးစားလျက်ပါ
Yesterday at 4:50am via mobile · Like
Aye Aye Mar လေးစားလျက်ပါ ဘုရား
Yesterday at 5:32am via mobile · Like
Aye Kyaw ဆရာတော်လည်းသက်ရှည်ကျန်းမာပီးသာသနာကိုစထက်တန်ဖိုးထန်းဆောင်နိုင်အါစေအရှင်ဘုရား
Khin Tin ၁၀၀% ပြည့် ဆရာတော်အား ယုံကြည် လေးစား ကြည်ညိုသူ တွေထဲမှာ တပည့်တော် လည်း ပါပါတယ်…ဆရာတော် ဘု၇ား လည်း လူမှုရေး ကူညီ မှုများ ကို ကျန်းမာ ဘေးကင်း စွာဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်၇ွက်နိုင်ပါစေ…
Yesterday at 6:19am · Like
Aung Myo Than အရှင်ဘုရား ကျန်းမာစွာနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိူင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Yesterday at 8:32am · Like
Nwe Ni ဆရာတော်ဘုရား ကျန်းမာပါစေ
Mohd Tauki သို့
မာမီ သီရိလင်ငါ နိုင်ငံသွားမယ်လို့ ကျုပ် သတင်းကြားသိရပါတယ်။
Mg Hein ဆရာတော် ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ သာသနာအကျိုး ဆထက်တိုး၍ သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ
Yesterday at 12:04pm via mobile · Like · 2
Kyaw Thet Nuree Hark မင်းလည်း သေမှာပါ ကြည့်ထားပေါ့
Yesterday at 12:23pm via mobile · Like
Kyaw Thet Mohd Tauki မင်း သတိထားတော့ ခွေးသားလေး
Yesterday at 12:24pm via mobile · Like
ဘာ ဘာဝက် Nuree Hark နဲ့ Mohd Tauki ဆိုတဲ့အကောင်တွေက ဝက်လိုးမသားအလ္လာရဲ့ သားတော်ဖြစ်တဲ့ ကာမသားကောင်မိုဟာမတ်၏ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတွေပါ။
ဘာ ဘာဝက် ဟေးးးကောင်.. ၉၆၉နဲ့ မင်းတို့ကို ဘာထိခိုက်အောင်လုပ်နေလို့လဲ ဆရာတော်က။ ၇၈၆=၂၁ = ခွေးအလ္လာ(၂၁-နံ)ပဲ…
Khinkhin Thein လူကမွေးတာမဟုတ်တဲံ့ခွေးကောင်ဘာဘာဝတ်နင့်အဖေ၀ီရသူကအဲ့လိုသင်ထားတာလး
Edward Win အမျိုးဘာသာ သာသနာ မျိုးချစ်တွေ အဆဲသန်ဆဲ 🙂
Ko Mg ဆရာတော် ၀ီရသူကျမ်းမာပါစေ တပည့်တော်တို နေထိုင်ရာ ကျောက်ပန်းတောင်းကို ကြွတော်မူခဲပါ တပည့်တော်တို အားပေးနေပါတယ်
← “မင်္ဂလာပါ ၁၃၇၅- ကြိုဆိုပါတယ်- ၁၃၇၅- လာခြင်းကောင်းပါစေ- ၁၃၇၅” by U Wira Thu	ဦးနာအောက်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၁၉၄-၁၂၇၅) →
pyae sone myint says:
သာသနာတော်အတွက် ရဟန်းနဲ့ အမျိုးသားတွေက အသက်စွန့်ကြဖို့ အသင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေက မွတ်ဆလင်တွေကို ယူနေတုန်းပဲ။ ဒီကိစ္စ ကို အရင် ကိုင်တွယ်ရမယ်။ မင်းကင်းနယ်ထဲကို တရားမဝင် ဘင်္ဂါလီတွေ ရောက်နေတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ မအူချောင်းဖျားမှာလို့ သတင်းပို့တယ်။ ရဲတွေက မဖမ်းပါ ။